‘Presidential input scheme politicised in Murewa South’ - NewsDay Zimbabwe
HomeNews‘Presidential input scheme politicised in Murewa South’
Previous articleWe will rob the bank: Dynamos
Next articleCredible elections will see GDP grow 6,5% by year-end
Zvinorwadza Chakuinga July 26, 2018	At	6:21 am
Comment…Dzimwe nzvimbo dzeMash East zvirikukonzerwa nehutungamiri hwemisha, maSabhuku nemakurukota avo. Havanyore vanhu vekutambira zvitambirwa padare. Asi kuti vanonyorana mudzimba. Uyezve gore rega rega maSabhuku nemakurukota avo ndovanota kutambira. Asi varikupa varikutsanangura nepavanogona napo matambiro anofanira kuita vanhu. Zvino maSabhuku arikungoita zvavanoda ivo zvekuti ivo chete nemakurukota avo ndivo vangowana zvose. Paneimwe nzvimbo Mash East, ndakanzwa Kanzura achiti mumwe munhu wemuWARD yaanomiririra ahasati atambira pamakore gumi nemashanu, zvichireva kubva 2003. Mamwe maSabhuku edunhu iri anotaura kuti vanonyora vatsigiri vezanu pf chete. Asi ivo vaiva madzakutsaku kusvika 1982. Nekudaro, pose panotambirwa dayi Hurumende yaisa suggetioon boxes pamwe zvingapedze huwori hwemaSabhuku. Pamwe pacho vanotonyora vana vavo vasisazivi nzira yekumusha.